Lasopy hazan-dranomasina | ThermoRecipes
Ity iray ity lasopy hazan-dranomasina Ataoko betsaka ao an-trano izany. Ny trondro dia toa sakafo tena mahasalama ho an'ny sakafon'ireo olon-dehibe sy ankizy. Ny ahy dia nihinana tamim-pahamendrehana tamin'ny lasopy hatramin'ny mbola kely. Iray amin'ireo lalao ankafizin'izy ireo ny mitsentsitra ny chirlas ary misambotra ny "bug" hoy izy ireo.
Tokony hiaiky aho fa any an-trano dia marefo isika, indrindra ny zazavavy sy izaho. Ity dia heveriko fa nolovaina tamin'ny reniko, satria na oviana na oviana ny ron-kena na lasopy dia tsara ho azy, na inona na inona vanim-potoana amin'ny taona misy antsika.
Ity lasopy hazan-dranomasina ity dia somary miasa mafy ho an'ny zava-misy amin'ny peeling prawn mba hanao tahiry tsara. Fa ny valiny dia mandresy lahatra zato isan-jato noho ny tsirony.
Ity dia fomba fahandro hafa izay azo raisina tsy fandeferana celiac sy gluten satria tsy mila karazana paty na mofo izy io.
1 Lasopy hazan-dranomasina
Amin'ity lasopy hazan-dranomasina ity dia hanana làlana voalohany mety amin'ny fankalazana rehetra ianao.
Fotoana hiketrehana: 42M
Vary 200 g
250 g an'ny chirlas
Rano 500 g (ho an'ny tahiry)
Steak mpitatitra entana 2
Tongolo lay 2
Dipoavatra kely maitso 1
Dipoavatra kely mena 1
Rano 700 g (ho an'ny tahiry)
Ny zavatra voalohany ataontsika dia manadio ny chirlas amin'ny fametrahana azy ireo ao anaty lovia misy rano sy sira. Avy eo dia manaosoka ny makamba isika.
Izahay dia mitazona ny faty ary ny akorandriaka dia ampiana amin'ny vera miampy ny rano. Izahay dia manao fandaharana 5 minitra, hafainganana 4, mari-pana varoma.
Sakano ny tahiry ary tahirizo ny ron-kena.
Ao anaty vera izahay dia manampy ny tongolo lay sy tongolo, manorotoro azy ireo 5 segondra amin'ny hafainganam-pandeha 4.
Ampio ny sakay sy voatabia ary afangaro 12 segondra amin'ny hafainganam-pandeha 10.
Ampio ny menaka ary endasina, 6 minitra, maripana varoma, hafainganana 2.
Avy eo izahay dia manampy ny rano, ny sira, ny dipoavatra, ny tahiry ary ny ravina bay. Napetrakay 15 minitra, hafainganana 2, mari-pana varoma.
Mandritra izany fotoana izany dia manasa tsara ny chirlas isika ary mametraka azy ireo amin'ny faritra ambany amin'ny fitoeran-drongony varoma.
Fonosinay anaty sarimihetsika mangarahara ireo atody ary apetaka miaraka amin'ireo chirlas.
Ao amin'ny tapany ambony amin'ny varoma dia apetrantsika ny fonosana fletan efa ela.
Amin'ny faran'ny fotoana dia apetratsika amin'ny vera sy ny programa hafa ilay fitoeran-doko varoma 15 minitra, maripana varoma, hafainganana 2.
Tamin'ny farany dia napetrakay tao anaty siny ireo vatana mangatsiaka ary navelanay hitsahatra vetivety izy io.
Miara-manatitra an'io lasopy io izahay miaraka amin'ireo chirlas, ireo trondro voatetika ary atody kely mba handravahana ny lovia.
Fanazavana fanampiny - Boribory trondro
Mitadiava fomba fahandro hafa momba ny: Celiac, hazan-dranomasina, Navidad, TRONDRO, Lasopy sy menaka
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Thermorecetas » Resipeo thermomix » hazan-dranomasina » Lasopy hazan-dranomasina
luis ezequiel olaya muñoz dia hoy izy:
io lasopy io ihany no tsara, ahoana ny fanendasana azy
Mamaly an'i luis ezequiel olaya muñoz
Io no lasopy tiako indrindra, tiako ny hazan-dranomasina. Araho ny dingana rehetra amin'ny fomba fahandro ary ho hitanao ny fahatairanao raha manankarena izany.
Toa tsara izany, azoko antoka. Fanontaniana iray monja, rahoviana no apetrakao ny paty, satria ao amin'ny sary dia misy paty, sa tsy izany?
Salama Lola, ataoko amin'ny vary izany ary ampiana 60 gr eo ho eo. taloha kelin'ny fandaharana ny 15 minitra farany. Raha manampy paty ianao dia vantany vao voapetraka ny fandaharana 15 minitra farany dia ampio rehefa afaka 9 na 10 minitra sisa. Manantena aho fa tianao izany.
aza mampiasa halibut fa trondro vita poizina io
Joaquin dia mamela ahy hanondro zavatra tena manan-danja ho anao. Novolavolainareo amin'ny entana ny entana. Ny fletan na fantatra koa amin'ny hoe halibut dia trondro fotsy misy tavy ambany izay manjono any amin'ny faritra avaratry Atlantika, raha ny panga kosa dia trondro rano velona izay nobeazina tao amin'ny Reniranon'i Mekong any Vietnam ary ny OCU dia nanao tolo-kevitra tsy handany miaraka amin'ny perch satria misy soritry ny fanafody famonoana bibikely sy merkiora (lahatsoratra europapress tamin'ny 4/03/2010).
Vaovao aho amin'ity thermomix ity, nomen'ny raiko ahy fotsiny izy. Amin'ny sabotsy dia manana olona hisakafo hariva aho ary tiako ny manamboatra lasopy an-dranomasina io manomboka amin'ny 1º, ny zavatra tokana tsy azoko tsara ny fomba fanaovana ny makamba raha ampiana azy ireo isika rehefa miala sasatra… izao no fanaovan'izy ireo. ?????
Misaotra anao ary miarahaba anao, manampy be dia be ianao
Noelia, ampianay ny makamba amin'ny faran'ny fitsaharana araka ny voalazanao ary miaraka amin'ny minitra vitsy amin'izany mari-pana avo lenta izany dia natokana ho azy ireo. Eny, bitika tokoa ny saro-bary ary tsy mila zavatra hafa. Azo antoka fa hivoaka tsara ary lovia izay tian'ny rehetra. Lazao amiko hoe ahoana.
Mila matsiro izy io fa tiako ny anoloranao ahy ny recette ho an'ny paella hanaovana azy ao anaty thermomix na dia tsy feno tamin'ny fangaro rehetra aza izy io fa zavatra mitovy amin'izany no tena tiako ny miarahaba anao.
Marimar, dia fomba fahandro izay mbola tsy navoakanay. Ao anatin'ny andro vitsivitsy dia hametraka azy isika. Mirary ny soa indrindra.
Nesa dia hoy izy:
Salama ho an'ny isan'ny olona miaraka amin'ireo akora ireo?
Valiny tamin'i Nesa
Salama Nesa, ho an'ny fanombohana ho an'ny olona 6 dia tonga lafatra izany. Misaotra nanoratra taminay!
olaaa Te hanana an'ity fomba fahandro ity aho saingy manana fisalasalana roa, inona izany momba ny steak mpitatitra entana? sy ny rano (ho an'ny tahiry). Fiarahabana.
Mbola tsy nametraka ny paette recette ve ianao? Miandry fatratra ny valinteninao aho raha tsy izany, mba hahitako raha azonao atao ny manazava amiko raha efa nanao izany tamin'ny thermomix ny fomba hanaovana izany, misaotra
Salama Marimar, azo antoka fa hametraka azy aorian'ny Krismasy isika, ankehitriny dia somary tafiditra ao anaty resipeo noely isika. Mba omeo andro vitsivitsy izahay, azafady. Mirary ny soa indrindra.
Misaotra betsaka ary mamela ny fanelingelenana
Manana faniriana mafy amin'ny paella aho, andeha hojerentsika raha afaka manantona azy tsy ho ela ianao, misaotra zazavavy, faniriana lehibe ny hanandrana azy amin'ny thermomix.
Salama, manana ny lasopy lasopy an-dranomasina misy anao aho ary azoko tsara ny zavatra rehetra
Rehefa tonga eo amin'ny dingana fametrahana ny atody sy ny entana feno entana aho dia mividy cazon dia tsy haiko ny manao azy amin'ny varoma dia tsy manana na inona na inona hisaraka aho na hidina, azafady mba ampio aho
Conchi, modely thermomix inona no anananao? na dia ao amin'ny tm-21 aza dia mianiana aho fa ny varoma dia manana lovia hahafahana mametraka gorodona roa fa hasiako antoka.
Hataoko anio hariva. Natolotry ny mpiara-miasa tamiko tamiko izany ary faly aho fa hitako ny pejinao satria eto ianao no manazava azy tsara kokoa noho ny amin'ny boky. Teo dia tsy haiko tsara raha tsy maintsy nandrahoina niaraka tamin'ny rano sy sira ireo chirlas, na nosasana fotsiny.
Mikasika ny halibut kosa dia miombon-kevitra amin'i Joaquín aho: poizina io. Hake dia tsara kokoa.
Mar misaotra tamin'ny fandraisanao anjara tamin'ny halibut dia horaisinay izany. Fiarahabana
Tsara ny tolak'andro dia nanoratra taminao i Silvia raha sanatria ka azonao atao amiko ny milaza hoe olona firy no itadiavam-pahandroana lasopy hazan-dranomasina
Nataoko tamin'ny alin'ny krismasy fa nanampy setroka bebe kokoa aho
fa tiako ho lazainao amiko ho an'ny olona 8 hoe manao ahoana ny fandrefesana
Conchi, miaraka amin'ity lasopy ity dia manana olona 6 na 8 aho matetika, fa raha toa fohy loatra dia azonao atao ny manampy kely kokoa, saingy tadidio fa tsy mihoatra ny 2 litatra no miditra amin'ny thermomix.
Manantena aho fa tianao izany, Mat. Misaotra betsaka anao nahita anay. Miarahaba sy tratry ny krismasy !.
Salama Mar, nataoko tamin'ny lasin'ny Noely sy ny reniko ny lasopy, matsiro tokoa
Tsy nanidina aho, naka ny rambon'ny moanina tsy nisy tsilo ary nahafinaritra tokoa ny fanekena, reniko
Miarahaba anao ary
Salama Conchi, ny marina dia ho ahy io dia iray amin'ireo lasopy raikitra amin'ny Noely. Tena tsara izy ary tiako koa amin'ny moanina. Miarahaba sy tratry ny taona 2011!
Salama e! Mba hahatratra ny antsasaky ny vola dia esoriko amin'ny antsasaky ny fangaro rehetra ireo, fa mitazona fotoana sy hafainganana? Misaotra betsaka tovovavy!
Eny Elena, notapahinao tamin'ny antsasaky ny fangaro ireo fa miaraka amin'ny fotoana sy hafainganana mitovy.
Misaotra ny resipeo lasopy hazan-dranomasina, hataoko amin'ny alin'ny Taom-baovao ho an'ny ankohonako manontolo izany, holazaiko anao ny vokany, misaotra, veloma.
Salama Jose, manantena aho fa tianao izany. Hataoko amin'ny Taom-baovao io. Tiantsika rehetra ity lasopy ity. Miarahaba sy tratry ny taona 2011!
Misaotra betsaka anao amin'ny resipeo, tena tiako ny bilaoginao, hataoko lasopy an-dranomasina mandritra ny faran'ny taona ary hiaraka aminy zavatra kely hafa hitako tany izy, oroka mahery vaika ary TAOM-PANAHY FALY
Tratry ny taona, Mari Carmen!. Manantena aho fa tianao izany ary misaotra betsaka anao nijery anay. Oroka.
Nataoko tamin'ny alin'ny Krismasy ary tianay be izany, omeko mihoatra ny 10
Misaotra betsaka, Paco. Faly aho fa tianao izany. Mirary ny soa indrindra.
Salama. Amin'ny alin'ny Taom-baovao dia hanomana ity lasopy ity aho, saingy andro vitsivitsy talohan'ny nanaovako izany mba hitsapana ny toetrany. Ny valiny dia tena tsara fa ho an'ny tsiriko, raha ampidiriko daholo ny tahiry dia matevina be ny tsiro. Manampy ny zava-drehetra ve ianao? Amin'ity indray mitoraka ity aho dia hanandrana manampy rano kely kokoa ary tsy mametraka ny tahiry rehetra. Raha ny tokony ho izy dia tsy maintsy manamboatra lasopy aho mandritra ny 20. Nieritreritra ny hanao an'ity recette ity in-3 aho ary hametraka azy rehetra ao anaty lalàna, fa raha manana hafetsena ianao hitehirizana fotoana dia tiako izany. Miarahaba anao ary tratry ny taona vaovao
Marga dia marina fa ny stock indraindray mifantoka be dia be ary afaka manampy rano ianao ary afaka manana mpihinana vitsivitsy ianao. Raha ny fitsipika ho an'ny maro dia be, nataoko in-3 araka ny nolazainao.
Miarahaba sy mirary fety sambatra !!
Salama daholo indray, tsara fa nahomby ny lasopy hazan-dranomasina, nasiako sakay mba hikasika azy masiaka, satria noheveriko fa tsy eo io. Misaotra ary hiandry ny recette paella aho, tohizo fa tsara.
Salama Jose, faly aho fa tianao ilay izy ary ny marina dia tonga lafatra ny mikasika ny sakay. Miarahaba ary manantena aho fa tsy ho ela dia hametraka ny fomba fahandro ho an'ny paella isika.
Mila milaza aminao aho fa ho ahy ity dia iray amin'ireo lasopy tsara indrindra nananako, nataoko aorian'ny sakafo hariva dia nohaninay ny ampitso! Gaga aho tamin'ilay tsiro, io no lasopy voalohany nataoko tamin'ny thermomix ary tsy noheveriko fa manana an'io hazan-dranomasina mahery io! Amin'ny filazako aminao fa na ny sipako aza dia naka (tsy tia lasopy mihintsy izy) ary efa nilaza tamiko izy hoe rahoviana aho no hamerina azy! tpt
Miaraka aminao aho Irene, ho ahy no lasopy tsara indrindra tsapako tamin'ilay thermomix. Faly aho fa tianao ilay izy. Mirary ny soa indrindra
Salama, vitako tamin'ny herinandro lasa iny, matsiro ity mahafinaritra ity, MANKASOA.
Mamaly an'i loli
Tiako izy izany. Io no lasopy tiako indrindra. Faly aho fa tianao ilay izy. Mirary ny soa indrindra
Salama omaly hariva no nanomanako an'ity lasopy ity hohaniko anio, saingy noheveriko fa tsara tarehy izany ary namboarinay izy io (satria 3 izahay, mbola mijanona hohaniko anio). Tena tsara izany, izaho, fa tsy manampy filite trondro, dia nasiako angisy kely ((malefaka), ary nahafinaritra. Ary teo amin'ny lovia ny zanako lahy dia nasiako salmon salama izay nomeko ho azy hisakafo hariva, notorotoroiko teo ambony lovia, ary nisakafo hariva mahafinaritra izy. ! tiany io! ary lovia eo amboniny ihany. Hahaha.
Ny tena marina dia ao an-trano io no lasopy ankafizinay indrindra. Ny zanako-vavy dia mihinana azy izay tsara. Hevitra tena tsara momba ilay kalamara, andramako amin'ny manaraka izany. Mirary ny soa indrindra
charo sanz solera dia hoy izy:
Miarahaba anao aho noho ny fomba fahandro rehetra amin'ny ankapobeny, satria hitako ny pejinao, faly izahay rehetra. Manokana, ny lasopy hazan-dranomasina efa nataoko imbetsaka, ary indrindra ny vadiko no tiako. Tena tsara ny asa ataonao. MISAOTRA ANAO.
Mamaly an'i charo sanz solera
Salama Silvia! Miarahaba anao ao amin'ilay pejy, 5 andro fotsiny no nanaovako ilay thermomix, ary handeha tsikelikely aho .., ny fisalasalako rehefa nilaza ianao fa nametraka ny tahiry izahay ary nitahiry ny ron-kena .., inona no tianao holazaina amin'izany? apetraka ao anaty vera? MISAOTRA
Maite, ny tiako holazaina dia ny "manaparitaka" ny tahiry isika, ary mitahiry ny ron-kena izay mivoaka avy amin'ny fandefasana ny stock amin'ny saringan mba tsy hisy akorandriaka navela na dia iray aza.
Oh, eny Silvia, marina izany .., tsy mbola namaky tsara aho .., misaotra betsaka!
Tena matsiro ity lasopy ity, nohanintsika hariva ary tena nahomby! ary vita vetivety ihany. Gaga aho amin'ny thermomix nolazain'izy ireo ahy momba izany ary noheveriko fa tsy dia ho ratsy loatra izany fa izao dia manana iray hitako fa natao ho an'ny maro !!!! fiarahabana
Nataoko ny lasopy an-dranomasina ary nanjary tena tsara, natahorako foana izy io noho ny fikorontananany, saingy vetivety dia vita io ary tena tsara ao an-tranoko, tianao be izany , Misaotra anao
Fanontaniana roa azafady |
-Ohatra no ampianao ny paty? Ary ahoana no fomba tsy maintsy anaovako in-3 eo ho eo ny habetsany satria 20 isika hisakafo hariva, azoko atao ve ny manangona azy rehetra ao anaty vilany mafana ihany aorian'ny fanamboarana azy sa mila miandry azy hangatsiaka aho? Misaotra betsaka.
Salama Susana, rehefa mila habetsahana bebe kokoa amin'ny resipeo aho, ny ataoko dia ataoko imbetsaka araka ny voalazan'ny resipeo dia apetrako ao anaty vilany, ary omeko hafanana farany.
Amboary ity lasopy ity amin'ny alin'ny Krismasy, ny andro talohan'ny nanandramako azy ary tiako ilay izy, tsy azoko inoana hoe manankarena izaitsizy ary tsy mihinana lasopy aho, tian'ny vadiko koa izany. Ny tena izy dia ny ampitson'io dia tsy nitovy izany, tsy fantatro izay nitranga, mbola nanan-karena be izy io fa nanaiky ny rehetra fa matanjaka be izy io, be loatra ny dipoavatra, tsy azoko ny lasopy ka tsy azoko fantaro hoe inona izany, saingy marina fa tsy fantatro tsara toy ny tamin'ny andro taloha, inona izany? peppers roa ve no ampiana? nilaza ny rehetra fa tsy maintsy manandrana manao azy tsy misy dipoavatra aho, izay namela azy ho matanjaka be. Misaotra betsaka amin'ny bilaogy, io no iray amin'ireo zavatra tsara indrindra amin'ny Internet. Tratry ny taona!
Pepitos na xuxos misy crème
Ranomasina miaraka amin'ny sira